Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : Ambatomanga
Teny nalaina : Ambatomanga
1896 Sibree James : Madagascar before the Conquest
1991 Ravelomanana Hermann : Ny lalana nombako
Ireo no vehivavy malagasy voalohany indrindra nomanin' ny Misiona ho amin' izany; kanjo tsy neken' ny governora jeneraly V. Augagneur ny hakan' ny vehivavy malagasy diplaoma (1905). Dia niverina tany Ambatomanga izy ary noraisin' i Mlle Rousseau misionera Talen-tsekoly tao hampianatra.
Avy ao Anahimalemy andrefan' i Mantasoa Idada ary Ineny avy ao Ampanarivo atsinanan' Ambatotelomirahavavy akaiky an' Ambatomanga. Niditra niomana ho mpitandrina tao amin' ny Sekoly Pastoraly Ambatomanga izy mivady ny taona 1911, ary efa niteraka ny zazany roalahy dia Philibert sy Guy.